Manchester United Oo Garaacday Kooxda Tottenham Horyaalka Premier League
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo garaacday kooxda Tottenham Horyaalka Premier League
April 12, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
kooxda Manchester United oo booqasho ugu tagtay kooxda Tottenham kulan ka tirsan Horyaalka Premier League ayaa ka gaartay guul muhiim ah ciyaar ku dhamaatay 1-3.
Xidigaha Son Heung-min ayaa daqiiqaddii 40aad ee ciyaarta gool ku bilaabay kulanka, iyadoo uu kubbad goolka loo hordhigay ku garaacay goolhaye Henderson, kaas oo yimid saddex daqiiqadood kaddib markii ay VAR meesha ka saartay gool ay Manchester United la hormartay.
Manchester United ayaa qaybtii dambe wacdaro dhigtay, waxaana goolka barbarraha u dhaliyey Fred daqiiqaddii 57aad iyadoo uu goolka ku celiyey kubbad uu soo tufay Hugo Lloris oo marka hore uu toogtay Edinson Cavani.
Goolka labaad ee Manchester United waxa madax iskula daadiyey Edinson Cavani oo ciyaarta oo dhan laf-dhuungashay ku ahaa Spurs, isla markaana saxeexay goolkii hore ee ay VAR diidday.
Ciyaarta oo sii dhamaanaysa ayay Manchester United goolka saddexaad ku niyad-jabisay Spurs, waxaana u dhaliyey Mason Greenwood oo beddel kusoo galay.
Natiijada ayaa ka dhigan in Manchester United ay 11 dhibcood ka danbeyso kooxda Man city oo heysa hogaanka horyaalka.